Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 27)
Samsung iyo Apple waxay sii wadaan inay lumaan shirkadaha Shiinaha
Warbixintii ugu dambeysay ee Gartner waxay xaqiijineysaa xogta laga helay Shaqadii hore ee IDC: Samsung iyo Apple Cede Market waxay la wadaagaan Soosaarayaasha Shiinaha
Maamuus 6A dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ku saabsan qiimaha garaacista
Honor ayaa hadda soo bandhigtay Honor 6A ee Shiinaha, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo aan ka badnaan doonin 150 euro markay tahay sarrifka
Standalone VR, muraayadaha cusub ee Google ee imaan doona dhamaadka sanadka
Google ayaa soo saari doonta qalab cusub oo leh Qualcomm iyo HTC dhamaadka sanadka. Waxaa loogu yeeri doonaa Standalone, muraayadaha VR ee iskiis u madaxbannaan.
Amazon waxay cusbooneysiisaa kiniinadeeda Fire 7 iyo Fire HD 8
Amazon waxay soo bandhigaysaa kiniiniyadeeda cusub ee la cusboonaysiiyay ee la hagaajiyay, Fire 7 iyo Fire HD 8, oo labadaba la heli karo laga bilaabo Juun 7
Ha moogaanin heshiisyada tooska ah ee Gearbest. Guriga daaqada ayey ka tuurayaan !!
Halkan waxaan kaaga tagayaa dalabyada tooska ah ee ka socda Gearbest si aad uga hesho taleefanka casriga ah ee aad dooneysay inaad hadda ku hesho qiimo aan la diidi karin.
Bipy, oo ah smartwatch Android ah oo loogu talagalay carruurta
Bipy waa smartwatch ka socda iibka gudaha Argentina oo loogu talagalay carruurta, in kasta oo si fiican loogu talagalay waalidkood inay xakameeyaan.
Apple ayaa dhaaftay Fitbit iyo Xiaomi oo ah iibiyaha dharka ugu weyn adduunka
Apple, oo leh Apple Watch, waxay dhaaftay Fitbit iyo Xiaomi oo ah soo saaraha ugu weyn iyo iibiyaha wearable (saacadaha smart, kormeerayaasha jimicsiga) ee 2017.
Dib u eeg Audbos DB-01, samaacado dhegta dhegaha leh oo tayo sare leh oo iib ah 49,99 Euros
Waxaan falanqeynay Audbos DB-01, dhagaha dhageysiga dhegaha ee iibka Amazon kaliya 49.99 Euros. Wadne qabad ayaa ku dhegtay dhagaha dhagaha iyadoo leh qiimo jaban.
Sameecadaha dhagaha xaday iyo smartwatch-ka soo socda ee Fitbit
Fitbit smartwatch-ka soo socda, oo gudaha loogu magac daray "Project Higgs", ayaa goor dhaweyd ku soo dhex dhuuntay wax yar oo turjubaanno ah waxayna aad ugu egyihiin Fitbit Blaze.
Ma u baahan tahay wajiyo cusub oo loogu talagalay smartwatch-kaaga? - Facer Daily Mix ayaa kaa caawin kara
Wajiyadda Wajiga Wajiga waa codsi loogu talagalay Android oo leh ku dhowaad 20.000 oo wajiyadood oo aad maalin kasta ku beddelan karto smartwatch ama smart watch.
Huawei wuxuu kor u kacay xagga sare ee shirkadaha sameeya taleefannada casriga ee Shiinaha
Shirkadda Huawei ayaa booska koowaad ka qabsatay Oppo waxayna noqoneysaa shirkadda ugu weyn ee soo saarta taleefannada casriga ah inta lagu gudajiray rubucii koowaad ee sanadka 2017
Acer wuxuu ku dhawaaqayaa 'Leap Ware', smartwatch cusub oo labanlaab ah jijin jimicsi
The Leap Ware waa Acer's smartwatch cusub kaas oo awoodi doona inuu la socdo dhaqdhaqaaqa jirka. Soo ogow astaamaheeda, qiimaha iyo taariikhda la heli karo.
Tilmaamaha OPPO F3 ayaa soo baxaya kahor intaanay bilaabin May 4
Oppo F3 wuxuu bilaaban doonaa 4-ta bisha Maajo oo leh laba kamaradood oo hore, MediaTek MT6750T processor iyo 4GB RAM. Waxaan soo bandhigeynaa astaamaha intiisa kale.
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa saacad smartwatch ah oo diiradda saareysa isboortiga oo leh madax-bannaanida 30 maalmood
Shirkadda Shiinaha ayaa soo bandhigtay barnaamijka 'Xiaomi Weloop Hey 3s', oo ah 'smartwatch' oo diiradda saaraya isboortiga, ismaamulkiisuna yahay 30 maalmood iyo qiimo aan caadi aheyn
Shaandheeyey astaamaha farsamada iyo qiimaha Moto E4 iyo E4 Plus ee soo socda
Astaamaha iyo qiimaha taleefannada gacanta ee soo socda ee hoose-dhexe ee Moto E4 iyo Moto E4 Plus ayaa horeba loo yaqaan, tan dambe oo leh batari 5000mAh ah.
ZTE Max XL, taleefan casri ah oo weyn oo wata batari aad u fiican oo keliya 120 euro
ZTE Max XL cusub waa taleefan casri ah oo aad u weyn oo leh shaashad 6 "ah, waa batari 3990 mAh ah oo lagu iibinayo kaliya 120 euro gudaha Mareykanka.
Hadda waxaad iibsan kartaa Casio Pro Trek WSD-F20, oo ah smartwatch dhan-dhul ah oo wata Android Wear 2.0
Casio Pro Trek WSD-F20 horeyba waa loo iibiyay qiimahiisu waa $ 500 wuxuuna leeyahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad kula socoto dariiqyadaada dabiiciga ah.
Sawirka ugu horeeya ee OnePlus 5 wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka kamarad gadaal laba geesood ah
Ugu dambeyntiina, waxaa la xaqiijiyey in OnePlus 5 uu yeelan doono laba kamaradood oo gadaal ah, marka laga reebo astaamo kale sida Snapdragon 835 SoC iyo ugu yaraan 6GB oo RAM ah.
Xperia XZ Premium waxaa laga heli doonaa Pink Bronze
Sony wuxuu ku dhawaaqay daahfurka Xperia XZ Premium, astaantiisa cusub, xulashada midabka saddexaad ee loo yaqaan Bronze Pink ama Rose Bronze
Google waxay soo bandhigi doontaa 3 telefoon Pixel oo leh Snapdragon 835 sanadkan
Jiilka labaad ee Google Pixel ayaa la imaan doona 3 aaladood oo cusub sanadkan, dhammaantoodna leh processor processor Snapdragon 835.
LG X Power 2 ayaa ugu dambayn la bilaabi doonaa bisha Juun
LG X Power 2, oo leh batari dhan 4.500 mAh, ayaa laga bilaabi doonaa horaanta bisha Juun ee Kuuriyada Koonfureed, saddex bilood ka dib sidii la qorsheeyay.
Huawei wuxuu ku cusbooneysiiyaa raaxeysiga 7 Plus iyada oo leh 4GB RAM iyo 64GB kaydinta
Toban maalmood ka dib markii la bilaabay, Huawei waxay cusbooneysiineysaa raaxeysiga 7 Plus oo leh nooc 4GB ah iyo 64GB kaydinta gudaha ah
Soo dejiso sawirada Xiaomi Mi 6
Warqadaha iyo waraaqaha Xiaomi Mi 6 ayaa hadda lagu soo dejisan karaa bilaash. Wadar ahaan waxaa jira 9 asal asal ah oo kujira xalka Full HD.
Xiaomi Mi Pad 3, waxaad horey ugu iibsan kartaa wax ka yar 250 euro
Banggood hadda waxaad ka iibsan kartaa Xiaomi Mi Pad 3 qiimo fadeexad ah iyada oo ay ugu wacan tahay dhiirrigelinta bogga iibka. qiimaheeda? in ka yar 238 euro
Huawei wuxuu aqoonsan yahay isticmaalka jajabyada kala duwan ee taleefannada casriga ah ee P10 iyo P10 Plus
Huawei wuxuu ku qirayaa bayaanka inuu adeegsanayo RAM kala duwan iyo xusuusta keydka ee taleefannada casriga ah ee P10 iyo P10 Plus
Android Wear 2.0 wuxuu gaari doonaa inta harsan ee smartwatches socon kara ilaa dhamaadka May
Google wuxuu balan qaaday inuu sii deyn doono Android Wear 2.0 inta hartay ee smartwatches ilaa dhamaadka May ugu dambayn. Ogow haddii saacaddaadu ay iswaafajin karto iyo in kale.
Xiaomi Mi 6 Plus ayaa dhawaan ku soo bixi doona shaashadda Snapdragon 835 iyo 5.7-inji
Xiaomi Mi 6 Plus wuxuu lahaan doonaa naqshad la mid ah tan caadiga ah ee Mi 6, inkasta oo baytarigeeda uu noqon doono mid awood badan leh shaashadooduna ay yeelan doonto inji dheeri ah.
HTC U waxaa la soo bandhigi doonaa 16-ka Maajo
Shirkadda HTC Firm waxay ku dhawaaqeysaa soo bandhigida Calankeeda xiga, Cadaadiska Cadaadiska Xasaasiga ah ee Nidaamka 'HTC U' ee May 16
Iibso Xiaomi Mi 6 ama sug OnePlus 5?
Xiaomi Mi 6 ayaa hadda lagu heli karaa 6GB oo RAM ah, processor Snapdragon 835, laba kamaradood iyo qiimo layaab leh. Laakiin ka waran OnePlus 5? Miyay fiicnaan doontaa ama ka sii xumaan doontaa?
Kani waa Xiaomi Mi 6 cusub oo leh 6GB RAM, 12 MPx dual camera iyo Snapdragon 835
Soo ogow astaamaha iyo qiimaha Xiaomi Mi 6, astaanta cusub ee Xiaomi oo la tartami doonta Galaxy S8 iyo mobilada kale ee dhamaadka sare leh.
Doogee MIX waa taleefan casri ah oo aan xaddidneyn oo lagu dhiirrigeliyey 'Xiaomi Mi Mix'
Doogee MIX waa mid ka mid ah qalabka loo yaqaan 'Xiaomi Mi Mix' oo ay la socdaan Helio P25 SoC, 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo ah xusuusta gudaha ah, iyo sidoo kale laba kamaradood. Dhamaadka ayaa si rasmi ah loo shaacin doonaa.
In kasta oo dadka badankood tixgeliyaan dhinaca bilicsanaanta markay xisaabtamayaan mid ama mid kale ...
Astaanta mustaqbalka ee HTC waxaa lagu magacaabi doonaa 'U Ocean' waana dhowaan soo socota. Waxaan muujineynaa astaamaheeda ugu muhiimsan iyo sawirrada ugu horreeya ee boosteejada.
Waxaan soo bandhigeynaa 4 ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee LG G6 iyo sida loo xaliyo. Dhibaatooyinka kaamerada, gaabis, ismaamul yar ama waxqabad la'aan.
Kani waa HTC One X10 oo lagu iibiyay Ruushka
Waxaan horey u ogaanay qeexitaanada farsamo ee HTC One X10 cusub, qeexitaan farsamo oo ay la wadaagto boosteejooyinka Shiinaha ee qiimihiisu yahay 200 Euro.
Maze Alpha, oo ah taleefan casri ah oo casri ah oo casri ah oo Android ah oo leh wareegyo khafiifa oo dheeri ah
Maze Alpha waxaa dhiirigaliyay Xiaomi Mi Mix wuxuuna leeyahay shaashad 6-inji ah oo bezel ka yar, sidoo kale 4 ama 6GB oo RAM ah iyo processor octa-core.
Xiaomi Mi 6 oo leh 6GB RAM ayaa burburiya Galaxy S8 ee Geekbench
Xiaomi Mi 6 wuxuu lahaan doonaa processor Snapdragon 835, Adreno 540 GPU iyo ilaa 6GB oo RAM ah. Bilaabisteeda waxaa loo qorsheeyay Abriil 19, 2017
Xiaomi Mi Note 3 cusub waxay soo saartaa rajo weyn
Suurtagalnimada cusub ee Xiaomi Mi Note 3 waxay sababtaa dareemo xanta ay abuurayso, waxay noqon kartaa taleefanka casriga ee ugu awooda badan taariikhda
Xiaomi MIUI 8.2 ayaa timid oo MIUI 9?
Xiaomi waxay heleysaa nooca cusub ee MIUI 8.2, walina wax raad ah oo ku saabsan nidaamka qalliinka MIUI 9. ma la heli doonaa Goorma ayey imaan doontaa?
Elephone ayaa fiidiyowga ku tusaysa nooc ka mid ah Elephone S8 oo leh shaashad 6-inji ah
Elephone S8 waa astaanta cusub ee Elephone, waxayna kudhowaad diyaar u tahay wax soo saar ballaaran. Shirkadda ayaa hadda daabacday fiidiyoow leh nooc.
OPPO R11 wuxuu yeelan doonaa 4GB RAM iyo shaashad 5.5 inji ah
Astaamaha Oppo R11 waxaa lagu soo daadiyay baaritaanka GFXBench, waxayna tilmaamayaan shaashad 5.5 inji ah, 15 kamarad MPx ah, iyo in ka badan.
Maamulaha guud ee Huawei wuxuu layaaban yahay waxa loogu talagalay smartwatches
Eric Xu Zhijun, oo ah madaxa shirkadda Huawei, ayaa qirey inuu weli la yaaban yahay waxa smartwatches u yihiin helitaanka taleefannada casriga ah
Motorola waxay diyaarineysaa bilawga Moto C iyo Moto C Plus
Xog cusub oo la helay ayaa muujineysa in Motorola ay diyaarinayso soo saarista laba taleefan oo casri ah oo qiimo jaban oo lagu kala magacaabo Moto C iyo Moto C Plus
Fitbit waxay dib u dhigeysaa soosaarida smartwatch-keeda cusub illaa ugu yaraan dayrta 2017
Warbixinno cusub ayaa tilmaamaya in Fitbit uu go’aansaday inuu dib u dhigo daah-furka taleefanka cusub ee casriga ah illaa dayrta sannadkan dhibaatooyin xagga GPS ah awgeed.
ZTE Quartz wuxuu noqon karaa smartwatch-ka ugu raqiisan Android Wear 2.0
ZTE Quartz waa Android Wear 2,0 smartwatch oo ku faano qiimaha ugu fiican ee lacagta. Waxaan muujineynaa astaamaheeda iyo qiimaheeda.
Sony waxay soo bandhigtay Xperia XA1 oo dhex-dhexaad ah oo leh kamarad qiimo leh gudaha Hindiya
Sony wuxuu Hindiya ka bilaabay Xperia XA1, taleefan casri ah oo wata naqshad qurux badan, heer dhexe iyo kamarad tayo sare leh oo qiimihiisu yahay 310 dollar.
Dib-u-eegis qoto dheer oo ku saabsan UMIDIGI Z PRO, oo ah kamarad-dhexaad dhexdhexaad ah oo kaa yaabin doonta
Halkaan waxaan kuugu dhaafayaa dib u eegistaan ​​qotoda dheer ee UMIDIGI Z Pro, oo ah terminal kamarado Android Dual ah qiimo aadan awoodin inaad rumeysato.
Waa tee smartwatches iyo goorma ayey helayaan Android Wear 2.0
Haddii aad wali sugeyso inaad ku hesho Android Wear 2.0 taleefankaaga smartwatch, maanta waxaan soo bandhigeynaa noocyada heli doona iyo goorta
Tilmaamaha OnePlus 5 ayaa xaday
The OnePlus 5 ee soo socda ayaa la tartami doona Galaxy S8 iyo LG G6 iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeynta dib loo cusbooneysiiyay iyo tusaalooyinka wanaagsan: Snapdragon 835, 8GB RAM, iyo waxyaabo kale oo badan.
Xiaomi Mi 6 iyo Mi 6 Plus: Qiimaha iyo astaamaha farsamada
Xiaomi Mi 6 iyo Mi 6 Plus cusub ayaa maanta si rasmi ah ay u soo bandhigi doontaa shirkadda Shiinaha, laakiin qiimayaashooda iyo astaamahooda ayaa durba la shaaciyay.
Falanqaynta Ulefone Gemini, oo ah taleefan casri ah oo leh laba kamaradood oo qiimo weyn leh
Soo hel falanqaynta Ulefone Gemini, oo ah meel dhexdhexaad ah oo leh laba kamarad iyo shaashad 5,5-inji ah iyo € 117. Baro dhammaan astaamaha.
Nokia 9 wuxuu imaan lahaa seddexaad seddexaad ee 2017 qiimo 749 euro ah
Nokia 9 wuxuu joogi doonaa dhammaadka bisha Luulyo iyadoo qiimahiisu yahay 749 euro Yurub, in kasta oo yaraanta processor-yada Snapdragon 835 ay dib u dhigeyso imaatinka suuqa.
LG G6 wuxuu ku faanaa tijaabada asalka asalka ah
LG G6 wuxuu dhex maray mashiinka Rube Goldberg tijaabadiisii ​​adkeysiga ee ugu dambeysay, halkaas oo lagu muujiyey astaamaha u adkeysi u leh dhicitaanka.
Sida dib loogu helo marinka mobilkaaga Samsung haddii aad ilowday lambarkaaga sirta ah ama PIN-ka
Haddii aad ilowday lambarka sirta ah ama lambarka sirta ah ee aaladdaada 'Android', waxaan ku tusi doonnaa hab fudud oo dib loogu helo marinka mobilkaaga.
LG G6, kani waa shaashaddaada
Waxaan ku tuseynaa dhammaan faahfaahinta shaashadda cajiibka ah ee LG G6 oo u taagan inay yeelato qaab 18: 9 ah iyo tikniyoolajiyad Full Vision ah
Sapphire crystal HTC U Ultra inuu ka soo muuqdo Yurub markay tahay Abriil 18
HTC waxay go'aansatay inay suuqgeyso taleefankeeda cusub ee casriga ah ee loo yaqaan 'HTC U Ultra' oo ay la socdaan safayr sidoo kale Yurub. Qiimaheeda wuxuu noqon doonaa 849 euro wuxuuna imaan doonaa Abriil 18.
Ulefone Power 2, ikhtiyaar dhaqaale u leh Huawei P10
Isbarbardhigga u dhexeeya Huawei P10 iyo Ulefone Power 2, waa laba taleefan oo u taagan nidaamkooda kamaradood ee labada dhinac dhabarka.
Tijaabin xawaare ah oo Galaxy S8 iyo LG G6 ay ku tartamayaan inay noqdaan kuwa dhaqso badan inta lagu guda jiro bilowga ama inay hore u furaan menusyo iyo barnaamijyo kala duwan.
Netflix wuxuu ciqaabayaa milkiilayaasha Galaxy S8 iyo LG G6
Netflix ma taageerto fiidiyowyada 4K UHD HDR ee casriga ah, inkasta oo Galaxy S8 cusub iyo LG G6 ay ku ciyaari karaan fiidiyowyadan.
Maamuus 8 Pro, kani waa dilaaga cusub ee shirkadda Huawei
Tani waa Sharafta 8 Pro, astaanta cusub ee soo saaraha oo la yaab leh astaamaha farsamada ee ku ammaanaya qaybta sare
Xiaomi wuxuu bilaabayaa isagoon ka digin Mi Pad 3 oo leh 4 GB oo RAM ah iyo qaab madow iyo caddaan ah
Xiaomi waxay bilaabeysaa ogeysiis la'aan Mi Pad 3, oo ah cusbooneysiin kiniinkeeda leh faahfaahin qeexan iyo qaab cusub oo madow iyo caddaan ah oo loogu talagalay akhriska
Pebble waxay cusbooneysiineysaa smartwatches-keeda si ay usii wadaan shaqada kadib xiritaanka adeegeyaashooda
Pebble smartwatches ayaa helay cusbooneysiin cusub oo firmware ah oo u oggolaaneysa inay shaqeeyaan inkasta oo la xiray server-yada shirkadda.
Ulefone ayaa hadda xaqiijisay in Ulefone Gemini Pro uu imaan doono bisha Abriil oo dhan waxaana lagu heli doonaa lix midab oo kala duwan.
Samsung Galaxy Note 8: Fikradda oo leh laba kamaradood iyo sawir-qaadaha sawirka
Fikradda Galaxy Note 8 oo leh faahfaahinno kala duwan oo xan ah, sida kamarad laba-gees ah ama sawir-qaadaha faraha ee lagu dhisay shaashadda.
Telefoonada casriga ah ee leh shaashadaha is-bogsashada ayaa imaan doona sanadka 2020
Seynisyahanno ka tirsan Jaamacadda Kalifoorniya ayaa soo saaray qalab is-bogsiin ah oo loo adeegsan karo shaashadaha taleefannada casriga ah sannadka 2020.
Ulefone Power 2 wuxuu yeelan doonaa Android 7.0 Nougat sida caadiga ah
Ulefone waxay ku bilaabeysaa Ulefone Power 2 wax ka yar 156 euro, oo ah terminal aad u dhameystiran oo la socda Android 7.0 Nougat qiimo aad u qiimo badan
Nokia 9 wuxuu noqon karaa taleefankii ugu horreeyay ee soo bandhiga tiknoolajiyadda "Nokia OZO Audio"
Nokia 9 wuxuu noqon karaa taleefankii ugu horreeyay ee soo bandhiga tikniyoolajiyadda codka ee Nokia OZO Audio, oo awood u leh maqalka 3D-hoose oo hooseeya.
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyowga hawlgalka GPS ee Ulefone Power 2, taleefan runtii xiiso leh oo ay ugu mahadcelinayaan batarikeeda 6050 mAh
Tani waa waxa xayeysiiska ugu horreeya ee TV-ga ee LG G6 u eg yahay
Xayaysiiskii ugu horreeyay ee telefishanka ee LG G6 waa kan oo waxaa ku yaal shaashad dhan 5.7-inji oo Full Vision ah oo leh foomka 18: 9.
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Moto G5 Plus Amazon iyo qiimo aan caadi aheyn
Waxaad horeyba uga iibsan kartaa Moto G5 si toos ah Amazon iyo qiimaha ugu fiican, kaliya 279 euro oo ah terminal leh dammaanad Motorola iyo Amazon.
Ulefone Power 2 oo iib ah illaa Abriil 10
Ulefone Power 2 wuxuu suuqa la yimaadaa dalab aan la dafiri karin: 158 euro iyo wixii ka sareeya waxay ku siinayaan 40 euro alaabada taleefanka
Telefoonada casriga ah ee biyuhu galaan, runtii?
Ma haysaa taleefan casri ah oo aan biyuhu qorin? Ka taxaddar inaad aaladdaada u dhigto baaritaanka, dammaanadda lagama yaabo in lala wareego iyadoo la raacayo caddeynta IP-ga
Ulefone Power 2 ayaa timid iyadoo lagu raray hadiyado
Ma rabtaa Ulefone Power 2? Hagaag, hadaad ka mid tahay 3000 oo macmiil ee ugu horeeya ee iibsanaya, waxaad helaysaa ilaaliye shaashad, dabool iyo saldhig hadiyad ahaan
Samsung waxay ku dhawaaqday Gear S3 Classic oo leh LTE oo ay weheliso fikradaha cusub ee smartwatch
Samsung waxay ku soo bandhigeysaa Baselworld 2017 a Gear S3 Classic oo leh LTE isku xirnaanta oo ay weheliso fikradaha kale ee smartwatch sida jeebka Gear S3
OnePlus 2 wuxuu helayaa nooc cusub oo ah OxygenOS, laakiin Android Nougat ayaa iska caabiya
Taleefanka casriga ah ee OnePlus 2 wuxuu helaa cusbooneysiinta OxygenOS oo ay ku jiraan horumarinno kala duwan, hase yeeshee, weli waxay sugeysaa tare Nougat
Casio wuxuu ku dhawaaqayaa Pro Trek Smart WSD-F20S, oo ah nuqul xaddidan oo smartwatch ah oo leh Android Wear
Casio Pro Trek Smart WSD-F20S smartwatch-ka cusub ee loo yaqaan 'Android Wear 2.0' wuxuu leeyahay naqshad casri ah oo xariif ah inkasta oo ay shirkaddu soo saareyso oo kaliya 500 unug.
LG Watch Sport, waa daawashada ciyaartoyda ugu badan
Marka loo barbardhigo sanadaha kale, daabacaaddan ugu dambeysa ee Mobilka Dunida Moobaylka si aad ah ayaa looga suntey. Caddaynta tani waa ...
Waxaan la sheekeysaneynaa Jia Wei, agaasimaha suuq geynta shirkadda ZTE Spain
Waxaan la sheekeysaneynaa Yia Wei, Agaasimaha Suuqgeynta ee ZTE Spain si aan ugu sharaxno wararka shirkada ee dalkeena
Ulefone Power 2 waxaa horay loo dalban karaa Maarso 29
Ulefone Power 2 waxaa laga dalban karaa laga bilaabo 29ka bisha soo socota ee March qiimaha ku dhow 170 euro iyo qiimo dhimis 40-euro ah.
Tiknoolajiyadda 'Super mCharge' ee Meizu waxay ku gaadhay 100% lacag ah 18 daqiiqo oo keliya
Tiknoolajiyadda soo dejinta degdegga ah ee Super MeCu ee cusub ee 'Super mCharge' ayaa naga yaabisay ka dib markii ay dib ugu soo celisay batteriga moobiilka oo yaraaday muddo 18 daqiiqo ah oo keliya.
Soosaaraha saacadaha raaxada ee Switzerland ee GC si uu u bilaabo qalabkiisii ​​ugu horreeyay ee Android Wear
Shirkada daawada raaxada ee Switzerland ee GC ayaa ku dhawaaqday inay bilaabi doonto khad cusub oo ah 'Android Wear smartwatches' dabayaaqada sanadkan
Beta-ka labaad ee Android 7.1.2 waxaa hada diyaar u ah tijaabiyaasha barnaamijka Android Beta oo wata Pixel C, Pixel XL, Nexus 6P iyo kuwa kale.
Fiidiyowgaan waxaan ku tusaynaa dhammaan faahfaahinta naqshadeynta LG G6, taleefan aad u adkaysi u leh naxdin iyo dhicitaan, marka lagu daro haysashada IP68
Sony wuxuu soo bandhigayaa Xperia L1 5,5 inji, 2GB RAM iyo kamarad 13MP ah
Shirkadda Japan ee Sony ayaa soo bandhigeysa Xperia L1, oo ah taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah oo leh 2GB RAM iyo kamarad 13MP ah oo la iibin doono Abriil
BQ Witbox Go, 3D daabacaad leh Android
Xagaagan, BQ waxay soo bandhigi doontaa Witbox Go, oo ah daabacad 3D ah oo wata Android, taas oo u sahli doonta habka daabacaadu inay aad ugu fududaato dadka isticmaala.
Shirkii Montblanc ayaa lagu dhawaaqay, smartwatch leh 'Android Wear 2.0' oo kaa qaadi doona tobanaan sano
Shirka Montblanc waa smartwatch cusub oo raaxo leh oo wata Android Wear 2.0. Waxaan soo bandhigeynaa astaamaheeda farsamo, qiimaha iyo taariikhaha la heli karo.
Kaaliyaha Google kuma jiri doono kiniiniyada Android
Google wuxuu xaqiijinayaa in Kaaliyaha Google laga heli doono oo keliya taleefannada Android Marshmallow iyo Nougat oo leh Adeegyada Google Play, ee aan ahayn kiniinno
Swatch waxay ku dhawaaqeysaa horumarinta nidaamkeeda hawlgalka u gaarka ah ee loogu talagalay smartwatches
Soosaaraha sharafta leh ee soosaaraha Swiss wuxuu ku dhawaaqay inuu horumarin doono nidaamkiisa hawlgalka u gaarka ah ee loogu talagalay smartwatches ama saacadaha casriga ah
Halkan waxaad ku haysaa dib-u-eegid dhammaystiran oo Isbaanish ah oo ka mid ah madax-weyneyaasha Wavefun X-Buds, headphones biyo iyo dhidid adkaysi ka yar 25 Euros.
Ulefone waxay xaqiijisay in Ulefone Power 2 uu la imaan doono laba nooc suuqyada Yurub iyo Ameerika, isagoo la jaan qaadaya dhamaan kooxaha
TAG Heuer wuxuu soo bandhigayaa Modular ku xiran, oo ah 'smartular smart' oo wata 'Android Wear 45'
Shirkadda sameecadda raaxada ee Swiss Tag Heuer ayaa ugu dambayntii daah furtay qalabkeeda casriga ah ee ku xiran 'Modular 45 smartwatch' iyadoo lala kaashanayo Intel iyo Google.
Huawei P10 vs Huawei P9, ma mudan tahay isbeddelka?
Waxaan sameyneynaa isbarbardhig u dhexeeya Huawei P10 iyo Huawei P9 si aad u aragto dhammaan farqiga u dhexeeya calanka hadda jira iyo kii ka horreeyay.
LG Watch Style, kani waa saacadda cusub ee LG
Waxaan ku sharaxeynaa dhammaan faahfaahinta LG Watch Style muuqaal fiidiyow ah oo kaliya 3 daqiiqo. Smartwatch aad u xiiso badan oo la yimaada Android Wear 2.0
Xiaomi waxay ku iibisaa hal milyan oo Redmi Note 4 muddo 45 maalmood gudahood ah Hindiya
Xiaomi's Redmi Note 4 waxay maamushaa inay ku iibiso hal milyan oo unug 45 maalmood gudahood gudaha Hindiya, iyadoo ah shirkadda ugu dhaqsaha badan shirkadda si ay u gaarto shaxdan dalka.
Qiimaha rasmiga ah ee LG G6 ee Yurub horay ayaa loo ogaa
Thanks to liistada ka socota MediaMarkt Jarmalka waxaan horey u ogaanay qiimaha rasmiga ah ee LG G6 ee Yurub. Qiimaha LG G6 ee Isbaanishku hubaal wuu noqon doonaa.
Kuwa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Android Wear smartwatches' ee xilligan
Qiyaastii bilawga guga 2017, iyo Android Wear 2.0 oo hadda la bilaabay, waxaan kuu keenaynaa xulasho leh smartwatches ugu fiican xilligan
Labada kamaradood ee Huawei P10 ayaa layaab ku leh DxOMark laakiin wali ma dhaafo Google Pixel
Huawei P10 wuxuu ku guuleystay 87 dhibcood DxOMark, isagoo garaacay iPhone 7, in kasta oo uu ku guuldareystay inuu ka adkaado Google Pixel ama Galaxy S7 Edge.
ZTE wuxuu kusii soconayaa si xoogan, iyo inbadan iyo in kabadan. Xaaladdan oo kale waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhig xiiso leh, ZTE Axon 7 iyo ZTE Axon 7 Mini. Laba soo jeedin oo waaweyn
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa fiidiyoow uu Juan Cabrera, Maamulaha Waxsoosaarka Huawei, inoo barayo dhammaan sirta ...
Waxaan kala hadalnay Juan Cabrera, Maareeyaha Wax soo saarka ee Huawei, wax ku saabsan bilaabitaankiisa MWC17, iyo sidoo kale ballanqaadka Huawei ee Internetka Waxyaabaha
Isbarbardhiga u dhexeeya shaashadda LG G6 iyo ta iPhone 7 Plus. Teknolojiyada Dolby Vision ee isku dhafan LG G6 ma u qalantaa?
Sharafta 9, Huawei waxay diyaarisaa wararka Abriil 5
Shirkadda Shiinaha ee Huawei waxay diyaarineysaa dhacdo gaar ah 5-ta Abriil ee soo socota, wax walbana waxay muujinayaan inay tahay daahfurka rasmiga ah ee Maamuuska 9.
Moto G5, dareenka ugu horreeya
Waxaan ku tijaabinay Moto G5 muuqaal fiidiyow ah intii lagu jiray MWC 2017, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo hadda leh jir ka samaysan aluminium si uu u siiyo taabasho heer sare ah
Movado si ay u daahfuraan smartwatches cusub oo wata Android Wear 2.0 deyrta
Soo-saaraha sharafta leh ee reer Switzerland Movado wuxuu ku dhawaaqayaa xilliga dayrta ee taxane cusub oo smartwatches ah oo ku saleysan Android Wear 2.0
Sony Xperia XA1, dareenkii ugu horreeyay ee MWC
Muuqaalka ugu horeeya ee fiidiyowga kadib tijaabinta Sony Xperia XA1 ee MWC, oo ah taleefan dhexdhexaad ah laakiin leh mid kamaradaha ugu fiican suuqa
Ulefone Gemini Pro wuxuu la jaan qaadi doonaa Kaaliyaha Google
Labada Ulefone Gemini Pro iyo inta kale ee terminalka Ulefone waxay la jaan qaadi doonaan Kaaliyaha Google, kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee awoodda badan ee Google
Bixinta cusub ee FreedomPop waxay kuu keeneysaa khadka taleefanka oo bilaash ah, SMS bilaash ah, Internet bilaash ah oo lagu daray FreedomPop V7 Smartphone oo keliya 59 euro hal mar oo lacag bixin ah.
FreedomPop ayaa ku soo rogay Boqortooyada Midowday taleefan casri ah oo u gaar ah nooca loo yaqaan 'Android' kaas oo ku kacaya £ 59
FreedomPop oo ah shirkad taleefan oo qiimo jaban caan ku ah, ayaa waxay taleefan casri ah ku bixisaa dalka Ingiriiska lacag gaareysa £ 59 oo keliya
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib tijaabinta Sony Xperia XA1 Ultra, Sony dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo cusub oo u muuqda shaashaddiisa cajiibka ah iyo kamaradda xoogga leh
Moto G5 Plus, dareenka ugu horreeya ee MWC 2017
Moto G5 Plus, muuqaalka ugu horeeya ee fiidiyowga kadib markii lagu tijaabiyay MWC 2017. Taleefan jidhkiisu ka kooban yahay aluminium iyo qalab aad u xiiso badan
Dot, «smartwatch ee la heli karo» oo leh farta indhoolayaasha
Maanta waxaan ku tuseynaa smartwatch kaa caawin doona inaad si fudud ugu xirto dadka aragga naafada ka ah, Braillew-ga ugu horeeya
LG G6, waxaan ku tijaabinay MWC 2017
Waxaan ku tijaabinay LG G6 MWC 2017, taleefan layaab leh shaashadiisa 6.7-inch oo aan lahayn biraha dhinac iyo kamaradiisa xoogga leh xagal
Sharaf 6X, dareenka ugu horreeya
Dareenka ugu horreeya ka dib tijaabinta Huawei Honor 6X ee MWC 2017. Telefoon dhexdhexaad ah oo leh 5.5-inji Full HD panel
Huawei Watch 2, dareenka ugu horreeya
Muuqaalka ugu horreeya ee fiidiyowga ee Huawei Watch 2, saacadda cusub ee Huawei ayaa lagu soo bandhigay MWC 2017 oo u taagan isku xirnaanshihiisa
Midka ugu wanaagsan bartamaha-bartamaha cusub ee loogu talagalay Android
Waa tan xulashadeenna saddexda ugu casrisan ee casriga casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee Sannadkan Mobile World Congress
Huawei P10 Plus, dareenka ugu horreeya
Muuqaallada ugu horreeya ee fiidiyowga kadib tijaabinta Huawei P10 Plus, shirkadda cusub ee Huawei ayaa lagu soo bandhigay Mobile World Congress 2017
Qiimaha 1000 euro miyaa qiil looga helayaa taleefannada casriga ah?
Dhamaanteen waan ognahay qiimaha taleefannada loo tixgeliyo inay yihiin kuwa ugu sarreeya, laakiin muhiim maahan inaad kubixiso nasiib si aad uhesho casriga casriga ah